China 6 DOF 165kg Payload Robotic Palletizer Manufacturer and Supplier |Yunhua
Compact dhizaini inoita kuti sisitimu ibatanidzwe munzvimbo yako iripo yekugadzira, ichibvumira kuisirwa uye kutumwa nekukanganisa kushoma.
-Mutengo webasa wakaderera
-Low kukuvara mwero
-Kuvandudza hutano uye kuchengeteka
Applications:Palletizing uye Depalletizing
6 Axis ine Big Payload Palletizing Robot
Yooheart Robot inopa kuchinjika kwepalletise mhando yezvigadzirwa nemazvo uye nemazvo uku uchidzikisa basa uye manyore kubata.
Iyo compact dhizaini inogonesa iyo sisitimu kuti ibatanidzwe munzvimbo yako iripo yekugadzira, ichibvumira kuisirwa uye kutumwa nekukanganisa kushoma.
HY1165A-290 inovimbisa kudzokororwa kweiyo pallet pateni uye inoderedza kukuvara kwemaoko ekubata kwakabatana nekudzokorora kwekufamba kwepalletising nemugadziri wemutsara wekugadzira.
Kunyangwe iwe uri depalletizing chigadzirwa kumberi kwemutsara wako kana kupuruzira kudzika kwakadzika, Honyen inopa mutsara wakazara wemarobhoti akagadzirwa uye akavakwa kuti aburitse basa repamusoro uye nguva dzekukurumidza kutenderera.Honyen marobhoti anga achibata zvakaoma uye akajairwa mashandiro kwemakore gumi.Kunyangwe iwe uri kupuruzira dhizaini yakazara kana mabhokisi ega, mabhegi, mapairi kana madhiramu masisitimu edu anokurumidza, akatsiga, uye akavimbika.
Multifunction uye Yakasiyana-siyana: Marobhoti edu epalletizing anouya neakasiyana emubhadharo wemubhadharo (max payload: 165kg), anosvika (max ruoko kureba: 3150mm) uye akasiyana akasiyana (4 axis robhoti uye 6 axis robhoti), kuve nechokwadi kuti unogara uchiwana mhinduro, Zvese. mainterfaces uye masisitimu ekupa simba zvakagadzirirwa kuita zvakasiyana nemabasa akasiyana.
Compact uye nyore dhizaini: Iyo compact uye yakakwenenzverwa dhizaini yeese palletizing marobhoti inogonesa kukurumidza uye nyore kusanganisa mumasisitimu aripo.Simpile madhizaini anowedzera iyo inoshanda inoshanda nzvimbo uye inobvumira hunyanzvi hwekushanda chiteshi pfungwa.
Kuchengetedza zvishoma: Zvese zvikamu zvepalletizing marobhoti ane zvitima zvinopfeka zvakaderera.iyo yepamusoro uye yakasimba dhizaini inoita yakanyanyisa kureba kwekugadzirisa nguva
1. Muviri webhokisi ndiyo hwaro hwezvinhu zvese muRV series reducer.Icho chinhu chakakosha chekuwedzera chinotsigira yakagadziriswa shaft system zvikamu, inova nechokwadi chechokwadi chehukama chinzvimbo chemidziyo yekufambisa uye inotsigira mutoro unoshanda pane RV inoderedza.
2. Basa guru regiya rehonye nderokufambisa kufamba uye simba pakati pemashaft maviri akapindirana, uye basa guru rekutakura uye shaft ndeyekutumira simba, kushanda nekuvandudza kushanda.
1. USB basa rinotsigirwa: kurerutsa kufambisa kwedata; nekukurumidza sisitimu yekuvandudza uye kugadzirisa
2. Yakabatanidzwa dhizaini yebhokisi rinobata ruoko uye mugamuchiri, Uremu hwechiedza hunochengetedza nzvimbo yemagetsi kabati.Shandisa LNC yakakwira kupisa dissipation yakazvigadzira chip
3. Back magineti suction dhizaini inoita pendant kuiswa chero chinzvimbo, uye hapana chikonzero chekumisa rutsigiro .yakaderera mutengo uye yakanakira
Yooheart Robot ichatarisa zvikamu zvese zvinouya, uye kurongeka kunodiwa ndeye 0.01mm.Chete marobhoti emuviri zvishongedzo zvinosangana nezvinodiwa zvinopinda mune inotevera link yekuisa.
1. Robhoti yakasimba uye inogona kushanda nguva dzose kwemaawa makumi maviri nemana, iyo inovandudza zvikuru kubudirira kwekugadzira
2. Iyo 5/6-axis mota yakavanzwa muruwoko, inobudirira kudzivirira kukanganiswa kusingakoshereki nezvigadziriso uye workpieces.
1. Iyo midziyo yerobhoti iri nyore mukugadzirisa, nyore kuchengetedza, uye inodhura-inoshanda
2. Kumhanya kwepamusoro uye kugadzikana, nzira chaiyo, kubata kwakakwana kwemhinduro dzakasiyana-siyana dzepalletizing
Ruking hombe simba servo mota
ISO9001 uye CE chitupa
Hunhu hwakanaka uye dhizaini yakasimba
Kukurumidza kumhanya kwepalletizing
Oiri chigubhu Palletizing system
Automobile hub stamping uye palletizing
Mabhasikiti eChikafu Robot palletizing system
Robot Palletizing Chikumbiro
HY1165A-290 ndiwo mubhadharo wedu mukuru we6 axis robhoti, uye Zvakare, Mashoma emhando dzemarobhoti ane mitoro mikuru.Iyi modhi inogona kushandiswa palletzing, depalletzing, kurodha uye kurodha, nekuita kwakanaka uye kwakagadzikana kuita.
Q. Ko nezve payload yePalletzing robhoti?
A. Tine 5, 10, 20kg 50kg, 165kg payload, kana iwe uchida mubhadharo wakakura, tinogona kugadzira.
Q. Ndogadzirisa panoperera maturusi emaoko pachangu here?
A. Tine chirongwa chose chebhobhoti iyi, haisi pfungwa yakanaka iwe unogadzirira gripers iwe pachako, nokuti inoda kushandira pamwe ne robot.
Q. Inguva yakareba sei iyo robhoti inogona kushanda?
A. Gore rekushandisa dhizaini makore gumi.kana iwe uchigona kuve nekuchengetedza kwakanaka uye kugara uchitarisira kushandiswa, hupenyu hurefu huchava nahwo.
Q. Kana nguva yewaranti yapera, ungatipa sevhisi here?
A. Chokwadi, tichakubatsira.Uye isu tichava nekuchengetedza zvinyorwa zvinokubatsira iwe kuziva kuchengetedza marobhoti.kana iwe uchida yedu yakananga sevhisi, iwe unofanirwa kubhadhara kune yako zvikamu.
Q. Inguva yakareba sei garandi?
A. Robhoti muviri, tine 18 mwedzi garandi, magetsi zvikamu 1 gore waranti.
Zvakapfuura: Auto zvikamu arc welding robhoti
Zvinotevera: fekitori mutengo wakaderera China Monthly Deals Customized Hydraulic Press Four Column 4 Post Hupfu Kugadzira Munyu Chidhinha Chidhinha Moto Chidhinha Refractory Material Hydraulic Press Machine
bhaketi palletizing robhoti
katuni robhoti palletizer
Indasitiri inobata robhoti
palletising robhoti mutengo
Sarudza Uye Isa Robhoti